Mitemo uye Mamiriro uye Yakavanzika Gwara - Kuverengera kune Humambo
Chibvumirano Pamusoro pekushandiswa kweiyi Webhusaiti
Iyi webhusaiti yeInternet inopiwa senzira yekutaurirana, dzidzo, kufemerwa, uye ruzivo. Saiti iyi ndeyayo uye inoshanda neCdowndown kuHumambo.
Zvese zvinhu zviri pawebhusaiti iyi, zvinosanganisira asi zvisingagumiri pazviri, zvirimo, kunyora, mifananidzo, mifananidzo, uye kodhi yemakombiyuta uye kushandiswa, zvinopihwa copyright neCdowndown kuHumambo kana nevanhu vechitatu.
Unogona kurodha zvinhu kubva pawebhusaiti iyi pachako, zvisiri zvekutengeserana chete, chero kodzero dzese dzekuremekedza uye dzehumwe ruzivo dzakabatana nezvinhu zvakadhindwa dzichengetwa. Hapana chimwe chezvinhu izvi chinogona kuve chakachengetwa mukombuta kunze kwekushandisa pachako uye chisiri kwekutengesa.
Iwe haugone kuchinjisa, kukopa, kubereka zvakare, kutsikisa, kuisa, kuisa repost, kuendesa, kugovera, chimiro, kana kushandisazve munzira ipi neipi chero chinhu kubva pane ino webhusaiti, kusanganisira, asi isina kuganhurirwa, kodhi, software, zvinyorwa, mifananidzo, marogo, vhidhiyo uye / kana odhiyo, kuburikidza chero svikiro iripo kana kuti isati yaumbwa.
Nongedzo dzakatemwa pamusoro pekushandiswa Kwemidziyo
Iwe unofanirwa kuremekedza mavara ese ekutengesa, marekitori, zvinyorwa zvevhisi, maratidziro, uye maratidziro pane zvese zvevadzidzi pane ino webhusaiti, ingave aya mavara ekutengesa, copyright, servicemark, marogo, uye mareti kana mamakisi ndezve Countdown kuenda kuHumambo, kana kupihwa rezinesi kubva mapato matatu. Iwe haugone kushandisa imwe yeaya marogo, zviratidzo, servicemark, patents, kana izvi webhusaiti zvemukati pasina mvumo yakanyorwa yakanyorwa yeCdowndown kuHumambo.
Kodzero dzakapihwa kuna Mambokadzi werunyararo Media
Kana iwe ukatumira kana kutumira mameseji, makomendi, data, uye / kana mazano ari kuenderana neKadoma kuHumambo kana yeimwe yemasevhisi edu kana zvigadzirwa, mave muchidaro muchivapa kodzero dzese dzeuchenjeri mune izvo zvinhu kuDesdown kuHumambo. Izvo zvinyorwa zvichanzi hazviteedzerwe, uye Kuverengera kuHumambo kunogona kushandisa chero mazano, nhaurwa, uye nehungwaru nhumbi nenzira ipi neipi yainosarudza, kusanganisira, asi kwete kungogumira pakuburitswa, kuburitswa, uye kuburitswa kuburikidza neipi svikiro ikozvino iripo kana kuti ichazove yakagadzirwa.
Kodzero dzinopihwa ndezvehumambo-isina, risingaperi, risingazungunuke, uye risingabvumidzwe, uye zvinosanganisira, asi hazvisi pamvumo, kodzero yekupa rezenisi, kutengesa, copyright, trademark, servicemark, uye patent zvinyorwa.
Zvepachivande uye Rondedzero Tsika
Kana iwe ukapa kuCdowndown kuHumambo nekero yako ye-e-mail kusaina kune iyo Countdown kune Kingdom newsletter, Countdown kuHumambo inoshandisa yako email chete kukutumira iwe tsamba. Iyo bumbiro yeCdowndown kuHumambo haisi yekupa yako e-mail kero kana ruzivo kune yechitatu bato.
Kuverengera kusvika kuHumambo kunogona kugovera zvinongedzo kune wechitatu-bato webhusaiti, kana kutaura nezveInternet mawebhusaiti anochengetwa neyechitatu mapato. Paunoshandisa iyi webhusaiti kana chero webhusaiti yakabatana kana kutaurwa pane ino webhusaiti, unozviita nekuzviisa panjodzi yako. Kuenda kuHumambo hakushande kana kudzora nzvimbo idzi dzechitatu-bato, uye nokudaro hazviite waranti, zvinoratidzwa kana kutaurwa, nezve chero zvigadzirwa zvinowanikwa pane aya echitatu mapato.
Kuenda kuHumambo hakuratidzi kuti webhusaiti iyi, zvikamu zvayo, kana basa rayo rive risingakanganiswi kana risina kukanganisa. Kuverengera kuHumambo hakuratidzi kuti webhusaiti iyi kana chero webhusaiti yakabatana newebhusaiti kana kutaurwa pane ino webhusaiti haina mavhairasi kana zvimwe zvinhu zvinokuvadza.
Hazvina mhosva kuti vanobatana neClouddown kuHumambo, kana chero munhu wechitatu akabatsira kugadzira, kuburitsa, kuburitsa, kana kushanda iyi webhusaiti, ane mhosva kune chero zvakananga, zvisina kunanga, zvinoitika, zvakakosha, kana zvakakonzera kukuvara kunokonzerwa nekushandiswa. ye, kana kusakwanisa kushandisa Countdown kune iyo Kingdom webhusaiti kana zvikamu zvayo, chero chikonzero chero chipi, kusanganisira kusakendenga. Nekushandisa iyi webhusaiti iwe unonyatso kubvuma uye unobvumirana kuti Kuenda kuHumambo hakuna mutoro kune chero mufambiro chero chipi zvacho chero mushandisi. Nekushandisa iyi webhusaiti iwe unobvuma uye unobvuma kune ese mazwi eChitenderano ichi.
Kana chero kupihwa kwechibvumirano ichi kuchiitwa kusingabvumirwe, kusakosha kwakadaro hakuzokanganisa zviga izvo zvinogona kupihwa kushanda pasina chikamu chisina kunaka.
Chibvumirano ichi chinofanira kudzorwa nekusimbiswa zvinoenderana nemitemo yeHurumende yeCalifornia, uye nzvimbo yacho kune chero chikonzero chezviito ichave Sacramento County, California.